रेणु यादवले सम्झाएको गौर नरसंहारः फोरमले यसरी गरेको थियो २७ माओवादीको हत्या - News Madhesh
काठमाडौं ,६ माघ । जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सीके. राउतलाई हत्याको चेतावनी दिँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा समाजवादी पार्टीकी नेतृ रेणु यादवले डेढ दशकअघिको गौर हत्याकाण्डलाई सम्झाएकी छन् । स्मरणीय यो छ कि गौर हत्याकाण्ड पनि रेणुकै पुरानो पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरमले मच्चाएको थियो ।
गत वर्ष कात्तिक ८ गते तत्कालीन उपप्रधानन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विराटनगर विमानस्थलमा पुगेर संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै गौर घटनाको छानबिन हुने बताएका थिए । तर, उनको बोली पनि बोलीमै सीमित भयो ।-नेपाल प्रेस